Ilmo hal habeen kaliya dhalnaa oo lagu xaday isbitaal ku yaala Muqdisho – Radio Daljir
Ilmo hal habeen kaliya dhalnaa oo lagu xaday isbitaal ku yaala Muqdisho
Abriil 20, 2019 11:15 b 0
Isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho ayaa habeenimadii xalay lagu xaday ilmo yar oo hal habeen kaliya dhalnaa, sida uu warbaahinta uu u sheegay aabaha ilmahaasi.
Aabaha ilmahaasi dhalay ayaa sheegay in salaaddii Makhrib xilli hooyada dhashay ilmahaasi ay jiifto lala baxay, waxaana dadkii la joogay hooyadaasi ay xiligaasi u baxeen saaladda Makhrib.
Waxaa uu ku eedeeyey maamulka isbitaalkaSOS inuu dayacay ammaankooda, isagoona dhanka kalle sheegay hooyada ilmaha dhashay inay miir daboolantay kadib dhacdada markii ay dhacday.
“Markii aan guriga tagay oo aan damcay inaan cashada soo qaado ayaa la isoo wacay oo la ii sheegay in ilmihii la xaday, gabar yar baana joogtay, markii aan damcay inaan waydiiyo maamulka iyo waardiyeyaasha cid kuu jawaabayso majirto, waana ilmihii iigu horeeyey qadar Alle ayayna ku dhacday, laakiin waxaa nasiib darro ah sida maamulka isbitaalka uu u dayacay dadka isbitaalka jiifa” ayuu yiri Mustafe oo ah aabaha ilmahaasi dhalay.
Arrintan ayaa ah mid ugub ku ah guud ahaanba Soomaaliya, iyadoona naxdin ay ku beertay waalidiinta.